Ikhaya elilungiswe kakuhle, iibhloko ezisuka kwiindawo zokutyela kunye nolonwabo !!
Eli khaya lihlaziywe kakuhle kwaye ligcinwe ngo-1890s ikhaya leVictorian lihlala kanye entliziyweni yesithili sembali saseMitchell Street, sinyuka nje induli ukusuka ePetoskey's kumbindi wedolophu yeSithili seGaslight. Yonwabela iingokuhlwa zasehlotyeni kwiveranda engaphambili uphunga iglasi yewayini, okanye uhambe nje iibhloko ezimbalwa ukonwabela iindawo zokutyela edolophini kunye nokuzonwabisa. Eli khaya linika amagumbi okulala amane kunye neebhafu ezi-3.5, zonke zihlaziywe ngokupheleleyo kunye nomtsalane walo wokuqala engqondweni. Inqanaba eliphambili libonelela ngekhitshi eliqaqambileyo elinedesika enkulu ecaleni kwendlela yokugcoba kunye nokonwabisa, iindawo ezimbini zokuhlala, igumbi lokutyela kunye nebhafu epheleleyo. Umgangatho ophezulu ubonelela ngawo onke amagumbi okulala aneebhafu ezi-2.5. Indawo yayo esembindini kwi-Harbour Springs, Charlevoix, Boyne City kunye nokunye, iyenza ilungele uhambo lwemini kunye nokuphuma kwigalufa. Jonga iimarike zomfama wendawo, ukuzonwabisa kwiipaki, okanye ubambe ibhayisekile yakho kwaye utsibe kwiLittle Traverse Wheelway. Qeda usuku lwakho ngokuhamba ezantsi echwebeni, apho uya kufumana okonakutshona kwelanga okumangalisayo! Njengazo zonke iindawo zokutshona kwelanga, yonke imihla ePetoskey yahlukile kwaye iyamangalisa! Indawo ayifumani ngcono ukuba ujonge ukufumana amava ePetoskey kweyona mbali iyimbali.
Boyne Highlands / Nub kaThixo Nob: 9 miles
Downtown Harbour Springs: 12 miles
Isikhululo seenqwelomoya sasePellston: iimayile ezingama-25
IiPropati zeVacation of Northern Michigan yinkampani elawula irente ebekwe edolophini ePetoskey. Sineminyaka eli-13 sisebenza kwaye siyakuqonda ukubaluleka kweholide kunye nolindelo olukhokelela kuyo. Siyabakhathalela abahambi bethu kwaye siyazingca ngepotfoliyo yethu yezakhiwo zokurenta. Siyakukhuthaza ukuba usijonge kwi-intanethi kwaye ufikelele ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo malunga nepropathi. Injongo yethu kukubonelela ngeyona holide ilungileyo kunokwenzeka ngeendawo ezicocekileyo / ezigcinwe kakuhle, unxibelelwano oluhle, kunye neendawo zolonwabo ukuze uqhubeke ubuya. UMntla Michigan uneentliziyo zethu, kwaye sifuna ibe neyakho nawe!
Inqanaba eliphambili libonelela ngekhitshi eliqaqambileyo elinedesika enkulu ecaleni kokugcoba kunye nokonwabisa, iindawo ezimbini zokuhlala, igumbi lokutyela kunye nebhafu epheleleyo. Umgangatho ophezulu ubonelela ngawo onke amagumbi okulala aneebhafu ezi-2.5. Yeyona ndawo isembindini weHarbour Springs, Charlevoix, Boyne City kunye nokunye, iyenza ilunge kuhambo lwemini kunye nokuphuma kwigalufa. Jonga iimarike zamafama asekuhlaleni, ukuzonwabisa kwiipaki, okanye ubambe ibhayisekile yakho kwaye utsibe kwiNdlela yeLivili eliNcinci. Qeda usuku lwakho ngokuhamba ezantsi echwebeni, apho uya kufumana okonakutshona kwelanga okumangalisayo! Njengazo zonke iindawo zokutshona kwelanga, yonke imihla ePetoskey yahlukile kwaye iyamangalisa! Indawo ayifumani ngcono ukuba ujonge ukufumana amava ePetoskey kweyona mbali iyimbali.